Iipropati zeAlumina zeCeramic Ring:
Iqondo lobushushu elitshisayo le-alumina ceramic iringi linokuba phezulu njenge-1650-1990 ℃. Ingenziwa kwiglasi etyhidiweyo endaweni yeplatinam crucible, kwaye ingasetyenziselwa ukwenza iityhubhu zesibane ngokusasaza ukukhanya kunye nealkali yentsimbi ukumelana nokubola.
Umsesane we-alumina ceramic unamandla agqwesileyo omatshini, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukuxhathisa ukunxiba, ukumelana nokugqwala, ukusebenza kakuhle kokugquma kunye nokuqina. Ineenzuzo zobomi obude, ukonga amandla, ukukhuselwa kwendalo, ukhuseleko, ukulawulwa njalo njalo.
Ngenxa yomsebenzi wayo ogqwesileyo wombane kwi-frequency ephezulu, i-alumina ceramic iringi inelahleko ephantsi ye-dielectric, ukumelana nomthamo ophezulu, amandla aphezulu, ubunzima obuphezulu, i-coefficient encinci yokwandiswa komgca, kunye nokunganyangeki kakuhle kunye nokumelana nobushushu. Ialumina isetyenziswa kuma-95% eemeko zoqoqosho jikelele. Kuphela ngama-99% ～ 99.9% yeeseramikhi zealumina ezikhethiweyo kwiimfuno ezizodwa zokusebenza.
Ukusetyenziswa kwe IAlumina Ceramic Ring :
I-Alumina Ceramic Ring isetyenziselwa ukuveliswa koomatshini, i-aerospace, izixhobo ezichanekileyo, i-petrochemical, imithombo emitsha yokukhanya, oomatshini belaphu, izixhobo zombane, izixhobo zefriji, izixhobo zokufudumeza zombane, izixhobo, imboni yeekhemikhali, unxibelelwano, unxibelelwano kunye namanye amashishini.
Ububi be-alumina ceramic ring:
Ngokubanzi, i-elastic modulus inkulu kakhulu, ukuqina kuphezulu, i-brittleness inkulu, kunye nobuntununtunu bokuqhekeka bomelele. Ke ngoko, ubunzima bomatshini bubonakaliswa ubukhulu becala kubulukhuni be-machining kunye ne-brittleness processing. Ngokubanzi, i-microstructure ye-alumina ceramics i-equiaxed grains, eyenziwe nge-ionic bond okanye i-covalent bond. Ke ngoko, ukuqina kokuqhekeka kwe-alumina ceramics kuphantsi. Uxinzelelo luya kwenza ukuba i-ceramic surface ivelise ukuqhekeka okulungileyo, kwaye ukuqhekeka kuya kwandiswa ngokukhawuleza kunye nokuphuka kwe-brittle. Ngoko ke, kwinkqubo yokwenza i-alumina ceramic ring, i-phenomenon of chipping ivame ukwenzeka, oko kukuthi, iintanda ezincinci zivela kumphezulu we-ceramic.
Iringi ye-Alumina ceramic eyenziwe ngokwezifiso Umsesane we-alumina ceramic